Nkwakọ ngwaahịa - Delta Engineering Belgium
Delta Injinịa na-enye igwe zuru oke maka ngwa eji ebu ihe.
Ọzọkwa lelee nke anyị ihe eji ebu ihe ka ichota osisa nke icho acho.
Gingkpụ ọkpọ bụ ọdịnihu ọkpọchi ọkpọ. Ego a na –eme ka akpukpo bu ndi 20% nke ndi n’echechi kaadiboodu ma belata oru oru. N'akụkụ nke a, ịkwakọ ngwaahịa bụ ụzọ dị ọcha nke eji etinye ngwongwo: ọ nweghị kọntaktị anụ ahụ na ngwaahịa a rụchara ọzọ ọ nweghịkwa ihe ọ bụla iji merụọ kaadiboodu.
Igwe eji akpa anyị niile, dị n’usoro ntọala ha, nwere ike imepụta ogologo mbukota na obosara iji kwalite nkwụsi ike. Emebekwara ha iji dochie karama ndị siri ike na ime ka ngwa ahịa gbanwee ngwa ngwa.
Rinzọ ọwara mmiri
N'akụkụ nke ndị na-akpa anyị, ị nwere ike iji otu ụzọ ụgbọ mmiri anyị si adị nro iji nyekwuo nkwado maka akpa ahụ.
Ndị na-eburu ngwongwo
Iburu ngwongwo a ka na-abụkarị ụzọ a na-esi etinye karama na mbad. Delta Injinịa na-enye ndị ngụ ngagharị zuru ezu, ọ dị mfe ịgbagharị ma gbanwee. Anyị na-enyekwa ọtụtụ nhọrọ sara mbara iji were karama kachasị sie ike. Ihe niile anyị na-ebu akpa nwere ike onwem nwere oghere ichekwa ohere na ụba na-ehi ụra tester.
Onyinye palletirs zuru ezu di, site na okara -aka rue ogha aka zuru oke. Iji bunye arịa dị warara ma ọ bụ bute karama ndị na-adịghị n'ime trays, n'ihe mkpuchi (n'akụkụ traves ndị nwere egbugbere ọnụ), na mpempe akwụkwọ dị larịị, na ọkara ma ọ bụ na trays zuru ezu. Ngalaba akpaka zuru oke nwere ike ime ka pallets ruo ihe dị elu nke 3.1m.
Chọpụta anyị mgbanwe stacking & destacking nkeji nke nwere ike iji mee trays, akpa, n'ígwé na elu na na.
Houseslọ nkwakọba ihe nke ahịhịa
Otu dị iche iche dị maka ijikọ iji nweta ahịrị ngwugwu zuru ezu.
Ndị na-agbanwe Lane
Ikesa ihe nkesa 1 na-abata 6 na-agafe.
Ndị na-akpa ikpe
Ngalaba iburu karama efu n'ime igbe kaadiboodu. N'aka nke ọzọ, enwere ike itinye ma ọ bụ dochie igbe ndị ahụ.
Iji tinye karama n'ụzọ a na-achịkwa na igbe ma ọ bụ silos na-agbanwe agbanwe.